अक्षयकी नायिकाको गर्भ बसेपछि (हेर्नुस् भिडियो) « Naya Page
अक्षयकी नायिकाको गर्भ बसेपछि (हेर्नुस् भिडियो)
प्रकाशित मिति :6May, 2019 1:26 pm
काठमाडौं, २३ बैसाख । बलिउड नायिका एमी ज्याकसनले सन् २०१९ मा एउटा तस्बिर शेयर गर्दै आफ्नो प्रेमीलाई सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
यसका साथै उनले जर्ज पानायिटूलाई आफूलाई भाग्यमानी महिला बनाई दिएकोमा धन्यवाद पनि दिएकी थिइन् । आफ्ना प्रेमीको नाम खुलासा गरेपछि नायिकाले आफू गर्भवती भएको समेत जानकारी दिएकी थिइन् जसले धेरैलाई चकित बनाएको थियो ।
एमीबारे अर्को नयाँ खबर सार्वजनिक भएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार उनले हालै आफ्ना प्रेमी जर्ज पानायिटूसँग लण्डनमा इन्गेजमेन्ट गरेको खबर छ । इन्गेजमेन्टको तस्बिर सोसल मिडियामा सेयर गरिएको छ । यो जोडीले इन्गेजमेन्टपछि चाँडै नै विवाह पनि गर्ने खबर आइरहेको छ । एमी अन्तिम पटक फिल्म २.० मा रजनीकान्त र अक्षय कुमारसँग देखिएकी थिइन् ।
A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani) on May 5, 2019 at 11:18am PDT
केही दिनअघि नायिकाले एक म्यागजिनसँगको अन्तरवार्तामा बच्चालाई यति चाँडै जन्माउने कुनै पूर्व योजना नभएको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘हामीले बच्चाको योजना बनाएका थिएनौं । हामी यस्तो अवस्थामा छौं जहाँ सबै कुराका लागि तयार हुन्छौं । मलाई लाग्दैन कि कसैले यसको लागि योजना बनाउन सक्छ तर हामी सही स्थानमा छौं ।’ एजेन्सी
काठमाडौं, ६ भदौ : लोकप्रिय गायक स्व. खेमराज गुरुङको नाममा स्थापना गरिएको खेमराज गुरुङ ट्रस्टले स्व.
चितवनमा साम्राज्ञी र पुष्पको क्रेज
काठमाडौं, ६ भदौं । अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहको युवापुस्तामा राम्रो क्रेज
अक्षय कुमार धेरै कमाई गर्नेमा फोर्ब्सको चौथो स्थानमा, सलमान–शाहरुख परेनन्
काठमाडौं, ५ भदौं । भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार विश्वका बढी कमाई गर्ने कलाकारहरुको तालिकामा चौथो